အပျိုကြီး မမ – Grab Love Story
မမဖြူက အသက် ၃၀ နီးပါး ရှိနေပြီ ။ အပျိုကြီးဆိုတာတောင်မှ အတော်ပင်ဟိုင်းနေပြီဟု ပြောရမည် ။ မမဖြူ က အတော်လှသည် ။ အသားဖြူ ဖြူ နှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ဗွီဒီယိုမင်းသမီးတွေလိုလှသည် ။ အချိုးကျသည်။ သူ့ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိမှာပဲ ။ ဘာလို့သူက မယူခဲ့တာလဲ ဆိုသော အတွေးတွေက ဖိုးချို ခေါင်းထဲ မကြာခဏ ရောက်လာနေကျပေါ့…။
ဖိုးချို အသက် ၂၀ ထဲရောက်နေပြီ ။ မိန်းမတွေရဲ့ အလှအပကို ခံစားတတ်ရုံမက ရွာမှာနေတုံးက ရွာလူကြီးရရဲ့ သမီးကိုပင် ခိုးပြေးဖူးသည် ။ သူ့သမီးကို ခြေသလုံးအိမ်တိုင် ဖိုးချိုနဲ့ သဘောမတူလို့ အတင်းလိုက်ခွဲပြီး သူ့သမီးကို မြို့သို့ ပို့လိုက်သည် ။ အသက် ၁၉ နှစ်နဲ့ ဖိုးချို တစ်ခုလပ် ဘ၀ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရောက်ခဲ့ရသည် ။
ရွာတွင် မနေချင်တော့သဖြင့် မြို့သွားချင်ကြောင်းပြောတော့ ဖိုးချို၏ တစ်ဦးတည်းသော ဦးလေးက သူ၏ သူငယ်ချင်း ရန်ကုန်တွင် ကားဘော်ဒီရုံ လုပ်နေသူ ကိုစံဖေထံသို့ စာရေးပေး လိုက်သည်။
လက်ရင်းတပည့်လိုချင်နေသူ ကိုစံဖေကလဲ ဖိုးချိုကို လိုလိုလားလား လက်ခံခဲ့သည် ။ ကိုစံဖေ့ ဇနီး မခင်လှကလဲ တစ်ရွာထဲသား ဖိုချိုကို ခင်သည် ။ ကိုစံဖေက မြို့တက်သွားတာ ကြာပြီမို့ သိပ်မသိခဲ့ပေမဲ့ မခင်လှကိုတော့ ရွာမှာနေထဲက ဖိုးချို ကောင်းကောင်းသိသည် ။
ကိုစံဖေတို့ လင်မယားက ဖိုးချိုကို သူတို့နှင့် တစ်အိမ်ထဲ အတူ နေထိုင်စေခဲ့သည် ။ အိမ်မှာက ကိုစံဖေတို့ လင်မယားနှင့် ကိုစံဖေ၏ ညီမ ဖိုးချိုအခေါ် မမဖြူ ဟုဆိုသော ဖြူဖြူ စန်းတို့သာ ရှိလေသည် ။
ကိုစံဖေက ဘော်ဒီဆရာ ဝင်ငွေကကောင်းတော့ ဇိမ်ခံရင်း ကဇော်သမား ဖြစ်လာခဲ့ရသည် ။ ၂၄ နာရီ ကိုစံဖေထံမှ အရက်နံ့က မပြတ်ရနေတတ်သည် ။ အခု ဖိုးချိုကလည်း ရောက်လာပြီး တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာလာတော့ အလုပ်လဲ ကြိုးစား အပင်ပန်းလဲခံလေသော ဖိုးချိုကို အတော်လေး မျက်နှာလွှဲလို့ ရနေပေပြီ ။
ဒီတော့ ကိုစံဖေက ခါတိုင်းထက် ပိုသောက်လာသည် ။ လက်ထဲမှာ ငွေကသီးနေတော့ မခင်လှကလဲ ကိုစံဖေကို မတား ။ သူကပင် ကြည်ဖြူ စွာဖြင့် ကိုစံဖေသောက်ရာတွင် မကြာခဏ လိုက်ပါနေတတ်သေးသည် ။
အခုလည်း ညနေ ၄ နာရီထိုးသည်နှင့် ကိုစံဖေက အလုပ်သိမ်းကာ ရေချိုးပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ထွက်သွားကြချေပြီ .။
ဖိုးချို ၆ နာရီ ထိုးမှ အလုပ်ကို လက်စသတ်ကာ ရေချိုးလိုက်သည် ။ ရေမိုးချိုးပြီး အဝတ်အစားလဲနေတုန်း မမဖြူရဲ့ အသံက ထုံးစံအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာသည် ။
ဒါက ညနေတိုင်း ကြားနေရသည့် အသံဖြစ်သည် ။ ထမင်းဝိုင်းတွင် ထိုင်ကြတော့ ဖြူဖြူ စန်းက ဖိုးချိုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်စားသည် ။ ထမင်းတစ်လုပ် စားလိုက် ဖိုးချိုမျက်နှာကို မျက်လုံးကြီးတွေ ဝင့်ကြည့်လိုက်ဖြင့် လုပ်နေသည် ။
ဖိုးချိုကတော့ ထမင်းကိုသာ ငုံ့ပြီးလွေးနေသည် ။ မျက်လုံးကို လှန်မကြည့်ရဲ့ ။ ဗြောင်သာ မကြည့်ရဲတာ ၊ မကြာခဏတော့ မမဖြူကို ခိုးခိုးပြီးကြည့်တတ်သည် ။ မမဖြူကလဲ လှတာကိုး…။ လူသားစားဖူးသော ကျားက လူနံ့ရလျင် အမြှီးနှံ့ ခေါင်းထောင်ရှာတတ်သည် ။ ဖိုးချိုကတော့ ဖြူ ဖြူ စန်းကို ခိုးခိုးကြည့်ပြီး သာယာနေတတ်သည် ။
ဖိုးချို ထမင်းကို ခေါင်းမဖော်တမ်း ငုံ့စားနေပေမဲ့ မမဖြူ ထမင်းစားလိုက် သူ့ကို မျက်လုံးရွဲနဲ့ ကြည့်လိုက် လုပ်နေမည်ကို အတတ်သိသည် ။
ဟယ်..ဟင်းက အရည်နဲ့သွားပြီ.. ပြောပြောဆိုဆို မမဖြူက ဟင်းပန်ကန်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး မီးဖိုချောင်ဖက် သို့ ထွက်အသွား သူမ၏နောက်ကျောကို ထုံးစံအတိုင်း ဖိုးချို ခိုးကြည့်လိုက်တော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ရင်ထဲတွင် တင်းသွားရသည် ။
ကားအယ်လုံထစ် ပြီး လှုပ်ခါနေသော တင်သားကြီးနှစ်လုံးက ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ဘာမှမထူးပေမဲ့ ထိုတင်သားကြီး နှစ်ခုစပ်ကြား အောက်ဖက်နားတွင် ဖြူ ဖြူ စန်း ဝတ်ထားသော ထမိန်မှာ အမြှောင်းလိုက်လေး စိုနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည် ။
မမဖြူ ငါ့ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ သာယာနေတာပါလား ဆိုသည့်အချက်က ဖိုးချိုစိတ်ထဲ သံမှိုစွဲသွားခဲ့လေသည် ။
ဖိုးချိုနားစွင့်လိုက်တော့ မမဖြူ အခန်းထဲက တူထုသံမှန်း သိလိုက်သည်..။
ဖိုးချို လှစ်ခနဲ မမဖြူ၏ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်သွားသည်.။ ဖြူဖြူစန်းတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်တွင် ခြေဖျားလေးထောက် လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်သို့ ဆန့်ပြီး တစ်ဖက်က သံကိုကိုင် တစ်ဖက်က တူနဲ့ မမှီမကန်း လှမ်းရိုက်နေသည်..။
ခြေဖျားကိုထောက် ခါးကိုစန့်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း မမှီမကန်း ဆန့်ထားရသဖြင့် ခါးကထမိန်က ကွင်းလုံးကျွတ်ကျတော့သည်..။
ဖွေးခနဲ ဖင်ကြီးကပေါ်သွားသကဲ့သို့ စောက်မွှေးအဖုတ်လိုက်ကြီးကလည်း ဖိုးချိုကို တစ်ကိုယ်လုံးတောင့်တင်းသွားစေသည်..။
မမဖြူ ထဘီကိုငုံ့၍ ကုန်းကောက်လိုက်စဉ် ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ နောက်သို့ ပြူးထွက်လာသော စောက်ပတ်ကြီးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး တွေ့လိုက်ရသည်…။ ထို့ကြောင့် ဖိုးချိုဝတ်ထားသော ဘောင်းဘီတိုလေးထဲမှ လီးက ဖြောင်းခနဲ ထောင်ထသွားပြီး တောင်မတ်လာတော့သည်..။ မမဖြူ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဘောင်းဘီတိုလေးထဲက လီးက ငေါက်တောက်ကြီး တန်းနေသည်ကို အသဲယားစဖွယ်ကြီး တွေ့လိုက်ရပြီး ထဘီကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုံးထွေးဝတ်ကာ ကြက်သေ သေသွားမိသည်..။
စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိ ၊ မမဖြူ၏ ခါးလေးကို ဖိုးချို ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူလိုက်ရာ ခါးလေး ကော့ခနဲ ဖြစ်ကာ ရင်ချင်း အပ်မိသွားသည်..။ ခန္ဓကိုယ်နှစ်ခု ပူးကပ်လိုက်မိသည်နှင့် သန်စွမ်းသော ဖိုးချို၏ လက်များက မမဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်လိုက်သည်..။
လီးတန်ကြီးကလည်း မမဖြူ၏ ပေါင်ကြားထဲ သို့ သန်သန်မာမာကြီး တိုးဝင်သွားလေသည်..။ ပူနွေးချိုမြသော အနမ်းစွမ်းအားက မမဖြူ၏ ခန္ဓကိုယ်ရှိ အကြောအချဉ်များကို ကိုင်တွယ်လှုပ်ခါပစ်လိုက်သည်..။ သူမ၏ ခန္ဓကိုယ်လေး ငလျင်လှုပ်သလို သိမ့်သိမ့်တုန်သွားသည်..။ မမဖြူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဖိုးချိုလည်ပင်းကို ရစ်သိုင်းထားမိလျက်သား ဖြစ်သွားလေသည်..။
ဖိုးချိုက လူငယ်ပီပီ လျင်သည်..။ မမဖြူ ဝတ်ထားသော ရင်စေ့ဘလောက်စ် အင်္ကျီလေးကို ဗြန်းခနဲ ဆွဲကာ ရင်ဘတ်နှိပ်စေ့တွေကို တစ်ချက်တည်းနှင့် ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ပေါက်စီကြီးတွေအလား ဖွေးဖြူသော နို့နှစ်လုံး လှစ်ခနဲ ထွက်လာတော့ ဖိုးချို ငုံ့၍ စို့သည်..။
စို့တာမှ အငမ်းမရ..အတင်းစို့လေတော့ မမဖြူမှာ ရင်ဘတ်ကလေး ကော့တက်လာသည်..။
မရပါ…။ အရှိန်တက်နေသော ဖိုးချိုက အတင်းငုံ၍ စို့နေသည်..။ တအားစို့သောကြောင့် နို့သီးထိပ်မှ အရည်ကြည်လေးများပင် စိမ့်၍ ထွက်လာကြသည်..။ နို့ရည်ကြည်တို့က ချိုမြိန်လှသလို နှစ်ယောက်စလုံး၏ သွေးသားတွေကိုလည်း ဗြောင်းဆန်သွားစေသည်..။
နို့စို့ရင်း ဖိုးချို၏ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်ကြီးကိုနှိုက်ကာ ရွရွလေး ပွတ်ပေးသည်..။ အပေါ်အောက်နှစ်ဖက်ညှပ်၍ ခံစားနေရသောကြောင့် မမဖြူမှာ တအင်းအင်းဖြစ်လာပြီး ပေါင်တန်ရှည်ကြီးတွေက ကားထွက်လာသည်..။
ဖိုးချိုက မမဖြူ၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး မာကြောတောင့်တင်းနေသော လီးကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်..။ လီးကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်..။ မမဖြူတစ်ယောက် ကြက်သီးတွေ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ထသွားမိသည်..။ ဖိုးချို သူ့ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရာ လီးကြီးက တရမ်းရမ်းဖြင့် ထွက်လာတော့သည်..။
မမဖြူသည် လီးကြီးကို အံ့သြစွာ ကြည့်ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာမှ လီးထိပ်ကို အသာဖြဲကြည့်လိုက်လေသည်..။
သပြေသီးမှည့်လို ညိုမဲပြောင်တင်းနေသော လီးထိပ်ကြီးက မမဖြူကို ချုပ်ထိန်းလိုက်သည်..။ အများအားဖြင့် လီးထိပ်တွေက နီရဲနေကြတာ တွေ့ဖူးသည်..။ ဖိုးချို၏ လီးဒစ်ကြီးကတော့ ထိုသို့မဟုတ် ၊ သပြေသီးမှည့်ရောင် ညိုမဲပြောင်တင်းနေသည်..။
ဒစ်ကြီးကလည်း ငါးမျှားချိတ်လို နောက်ပြန်ကော့နေသည်..။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးဝင်သွားပါက ဒစ်က စောက်ပတ်အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ဆွဲချိတ်ပစ်မည့်သဘော ရှိသည်..။
မမဖြူ၏ မျက်နှာဖွေးဖွေးလေး နီမြန်းလျက် စောက်ပတ်ဝက တစစ်စစ် ဖြစ်လာရသည်..။ အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေတော့သည်..။
မမဖြူက ပြောပြောဆိုဆို လက်ညှိုးလေးဖြင့် လီးထိပ်ကို တောက်ကနဲ ရိုက်လိုက်ရာ ဖိုးချိုဖင်ကြီး တုန်ခါသွားရသည်..။
တုန်တုန်ရင်ရင်လေး ပြောရင်း လီးတန်ကြီးကို ပါးပြင်လေးနှင့် ဖိကပ်ကာ ပွတ်လှိမ့်ရင်း ကျေကျေနပ်နပ်လေး ကြည်နူးနေရှာသည်..။ မချင့်မရဲ ဖြစ်လာသော မမဖြူက လီးထိပ်ကို နှုတ်ခမ်းလေးများဖြင့် ပြွတ်ခနဲ တစ်ချက် စုပ်နမ်းလိုက်ရာ ဂွေးစေ့ကြီးနှစ်လုံးက ကျုံ့ခနဲ အပေါ်သို့ လိမ့်တက်သွားသည်..။
မမဖြူသည် လီးထိပ်က အရေပြားကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပြီး အညိုရောင်သန်းနေသော လီးထိပ်ကြီးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် တို့ထိ ကစားလိုက်သည်..။ လက်ထဲ၌ ဆုပ်ထားသော လီးတန်ကြီးက တင်းခနဲတင်းခနဲ ထကြွသွားပြီး အကြောကြီးတွေ ထောင်ထသွားလေသည်..။
မမဖြူ၏ လျှာဖျားလေးက လီးထိပ်ရှိ အရေကြည်လေးတွေ ထွက်နေသော အပေါက်လေးထဲသို့ ဆတ်ခနဲ နေအောင် ထိုးလိုက်သော အခါ…
ဖိုးချိုက ရုတ်တရက် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို မမဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားသို့ ဆောင့်၍ ထိုးထည့်လိုက်မိ လေတော့သည်..။
မမဖြူ၏ ပါးစပ်ထဲ လီးကြီးက ကြပ်သိပ်စွာဝင်သွားပြီး လီးထိပ်က အာခေါင်ကို သွား၍ ထိုးမိလေရာ အသက်ရှူပင် မှားသွားရလေသည်..။ ဖိုးချိုကတော့ မမဖြူရဲ့ ခေါင်းလေးကို စုံကိုင်လျက် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးပစ်လိုက်သည်..။ မမဖြူ မျက်နှာလေး နီရဲကာ မျက်ရည်လေးများ ဝိုင်းသွားပြီး ဖိုးချို၏ လမွှေးအုံကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်တွန်းကာ ခေါင်းကို နောက်သို့ ဆွဲကာ ရုန်းဖယ်လိုက်ရလေသည်..။ ထိုအခါကျမှ ဖိုးချို၏ လီးတန်ကြီးက မမဖြူ လက်ထဲမှ ပြွတ်ခနဲ လွတ်ထွက်သွားရလေသည်..။
မမဖြူ မျက်နှာနီလျက် ဖိုးချိုကို မျက်စောင်းလေးထိုး၍ ပြောသည်..။ ဖိုးချို ကမန်းကတန်း ထိုင်ချလိုက်ကာ မမဖြူ၏ ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။
မင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တာကလဲ ..ငါ့မှာ အသက်တောင် ဘယ်လိုရှူရမှန်း …မသိဘူး….
ဖိုးချိုက မမဖြူရဲ့ ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ညင်သာစွာ နမ်းလိုက်သည်..။ ဒေါပွနေသော အပျိုကြီး မမဖြူ တစ်ယောက် ကျေနပ်သွားရလေသည်..။
မမကို ကျနော် ယက်ပေးမယ်…နော်….
အဲဒီလို လုပ်ပြီး…နှူးနှပ်ထားမှ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ မမဖြူလဲကောင်း ကျနော်လဲ ကောင်း……
အံမယ်…..မင်းလုပ်တာကို ဘယ်သူက ခံမယ် ပြောနေလို့လဲ….ရီရတယ်…တော့…ခစ်ခစ်….ခစ်..
ဖိုးချို တင်းသွားသည်..။ လီးကြီးက တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့….ဟု စိတ်ထဲက ရေရွတ်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်နေသော မမဖြူကို အိပ်ယာပေါ်ဆွဲလှဲ လိုက်သည်..။ အားဖြင့် ဆွဲလှဲလိုက်ပေမယ့် မမဖြူက ရုန်း၍ တောင့်ထားသဖြင့် ပုံလျက်သား လဲကျမသွား..။ ဖြစ်သလို ဝတ်ထားသော ထဘီက ကျွတ်ကျသွားပြီး လူက အိပ်ယာပေါ် လက်ထောက်မိကာ လေးဖက်ကုန်းလျက်သားလေး ဖြစ်သွားရသည်..။
ဖိုးချိုက ဖြတ်ခနဲ သူမနောက်သို့ ဒူးထောက်ဝင်လိုက်ပြီး မမဖြူ၏ ကျောကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖိကာ လီးထိပ်နဲ့ တေ့ထောက်လိုက်သည်..။
အဲ့…ဟဲ့….အဲဒါ ….ဖင်နော်….အပေါက်မှားပြီး ထိုးမထည့်လိုက်နဲ့…..နေအုံးလေ….
ဖိုးချိုက ဖင်ဝကို လီးထိပ်ကြီးဖြင့် တရွရွ မွှေနှောက်ပေးလိုက်ရာ မမဖြူဖင်ကြီး ကော့ထောင်၍ လာသည်..။
မမဖြူ ပြောနေစဉ် ဖိုးချိုက စအိုဝကို လီးထိပ်ဖြင့် မွှေမွှေပေးရင်း လက်တစ်ဖက်က ဖင်ကြားအောက်မှ နောက်ဖက်သို့ ပြူးထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆွဲပွတ်လိုက်ရင်း လက်ချောင်းဖြင့် စောက်စေ့လေးကို ချိတ်ချိတ်ပြီး ဆွပေးလိုက်သည်..။
မမဖြူ ဖင်ကြီး ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ ကော့ကော့ တက်သွားသည်..။ ဖိုးချိုက အစေ့လေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ဖိ၍ ဆွဲနေစဉ် သူ့လီးကြီးကလည်း စအိုဝလေးကို မနားတမ်း ပွတ်ပေးနေသည်..။
မမဖြူ၏ ဖင်ကြီးက ရမ်းခါနေသည်..။ စောက်ရည်ကြည်များကလည်း ပေါက်ခနဲ ပေါက်ခနဲ…ယိုစီးကျ၍လာသည်..။
မမဖြူ၏ ကော့ထောင်နေသော ဖင်ကြီးက ဟိုရမ်းသည်ရမ်း နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် ဖြစ်နေသည်..။ ဖိုးချို၏ လီးထိပ်မှာလည်း အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ဖိုးချို က မမဖြူ၏ စောက်ပတ်အဝ ဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ဖြဲ၍ လီးကြီးကို တေ့သွင်းလိုက်သည်..။ ရှုံ့ထားသောကြောင့် မမဖြူ၏ စောက်ပတ်က တင်းကျစ်နေပြီး လီးထိပ်ကြီးကို ဖမ်းညှစ်ထားရာ ဖိုးချိုမှာ အားစိုက်လျက် ဆောင့်ချလိုက်သော အခါတွင်မှ လီးဒစ်ကြီးက ကျွံဝင်သွားရလေသည်..။
လီးက ကြီးလွန်းတော့ ခံရတာ မသက်သာလှချေ…။ ဖိုးချိုကလည်း လီးဒစ်ဝင်သွားပြီး နူးညံ့စိုအိသော စောက်ခေါင်းအတွေ့ကို ရသွားသည်နှင့် လီးကို ခပ်ဖိဖိလေး ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်သည်..။
အင်း….. ဟူသော အသံရှည်လေးဆွဲရင်း မမဖြူမှာ ရှေ့မှထောက်ထားသော လက်နှစ်ဖက်က ပျော့၍ ကွေးပြီး ဝပ်ကျသွားလေသည်..။
စောက်ပတ်အုံကြီးကသာ မတရားထွားကားနေသော်လည်း စောက်ခေါင်းပေါက်က ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဖြစ်သောကြောင့် ကြီးမားလှသော ဖိုးချို၏ လီးကြီးမှာ အရသာတွေ့လှသည်..။ ဆက်ကာဆက်ကာ ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ မမဖြူရဲ့ ဖင်ကြီးမှာ လှုပ်ခနဲ လှုပ်ခနဲ ဖြစ်သွားရာမှ တုန်တုန်သွားသည်..။ စောက်ပတ်အုံကြီးက ပို၍ နောက်သို့ ပြူးလာပြီး ခံအားကလည်း ကောင်းနေသောကြောင့် ဖိုးချို၏ လိုးအားကလည်း ပို၍ ထန်လာရတော့သည်.။ ထိသလား မမေးနဲ့..တစ်ချက်ဆို ဆိုသလောက် ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း စောက်စေ့လေးမှာ ကျင်တက်သွားသည်..။
ဟူသော အသံမျိုးလေးသာ နားထဲဝင်လာလို့ကတော့ ဆိမ့်ကျင်သွားအောင် ကောင်းပြီး အသဲကို စွဲသွားတတ်လေသည်..။ ဖိုးချိုက ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်လိုက် မှေးပြီး ခပ်ဖွဖွလေး ဆွဲဆွဲထုတ်လိုက် ဖြေးဖြေးလေး သွင်းလိုက် စောက်ပတ်ညှစ်အားလေးကို ခံစားလိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုးလုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ပြီးနောက် မမဖြူ၏ ဖင်ကြီးကို ပွတ်ကာ သပ်ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်ပါတော့သည်..။
မမဖြူကလည်း သူမ၏ ဖင်ကြီးကို အားကြိုးမာန်တက်နောက်သို့ ပြန်ပြန်ကော့ပေးနေသည်မှာ ဖင်ကြောကြီးများ ထောင်လာသည်အထိပင် ဖြစ်သည်.။
အသံရှည်လေးဆွဲရင်း မမဖြူတစ်ယောက် ခေါင်းထောင်ကာ ဖင်ကြီးရမ်းသွားချိန်မှာတော့ ဖိုးချိုကလည်း သူ့လီးကြီးကို အဆုံးစိုက်သွင်းပြီး အရေများကို ပန်းပြီးထည့်လိုက်ပါတော့သည်..။
အသံကို ခပ်အုပ်အုပ်ခေါ်ကာ မခင်လှက စံဖေကို လှုပ်နှိုးသည်..။ စံဖေ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ပေ…။ တရှူးရှူးဖြင့် အိပ်မောကျနေသည်..။
ကျွတ်….ဒီနေ့ လျှော့သောက်ပါလို့ ပြောထားတဲ့ ဥစ္စာ..အိပ်နေလိုက်တာ..သေနေတဲ့ အတိုင်းပဲ…..
အတော်ပင် ဒေါသထွက်လွန်း၍သာ မခင်လှ ဒီလို မြည်တွန်တောက်တီးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်..။ အမှန်က ကိုစံဖေက မခင်လှထက် အသက် ဆယ်နှစ်မျှ ကြီးသည်…။ မခင်လှအသက်က ခုမှ ၃၀ ထဲ ရောက်ရုံသာ ရှိသေးသည်..။ သွေးသားအဆူဖြိုးဆုံး အရွယ် ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်..။
တဖြေးဖြေး အရက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်လာသော စံဖေက သူ့ထက်အများကြီးငယ်ပြီး ဆူဆူဖြိုးဖြိုး လှပတောင့်တင်းသော မခင်လှကို ပင် ဂရုမပြုနိုင်အားတော့ မူးပြီးရင်းသာ မူးနေခဲ့သည်..။
စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် စောင့်စားခဲ့ပေမယ့် မနေနိုင်တော့သည့်အဆုံး မခင်လှ ဒီနေ့ အရက်ကို လျှော့သောက်လာခဲ့ဖို့ နဲ့ ကျမနဲ့လဲ အေးအေးဆေးဆေး နေပါအုံး ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောထွက်ကာ မှာလိုက်ပေးမယ့် စံဖေ ဘယ်လောက်တောင် သောက်လာသည် မသိ ။ ပြန်ရောက်လာကထဲက အိပ်ယာထဲ အလျားထိုးဝင်ကာ အိပ်လေတော့သည်..။
မခင်လှကလည်း ဒီနေ့မှ စံဖေ၏ နောက်သို့ လိုက်၍ မသွားဖြစ်…။ အိမ်မှာ ဖြူဖြူ က မရှိ..။ သူတို့၏ ညီမ ဝမ်းကွဲများ အလည်လာ၍ ပြန်သွားသော ပဲခူးသို့ ဖြူဖြူက လိုက်ပါသွားခဲ့သည်..။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမှ ပြန်လာမည်ဖြစ်၍ ဖိုးချိုနဲ့ သူမအတွက် ညစာကို ချက်ရပြုတ်ရသေးသည်..။ သက်ပြင်းအခါခါ ချရင်း ခြင်ထောင်ထဲ တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက် အိပ်ပျော်နေသော စံဖေကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကြည့်နေမိသည်..။
မခင်လှ စိတ်ကတော့ မလျှော့ချင်သေးပါ..။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟု တွေးနေမိသည်..။ နောက်ဆုံးကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် မခင်လှက ပြေလျော့နေသော စံဖေ၏ ပုဆိုးကို ပေါင်လည်လောက်အထိ ဆွဲချလိုက်သည်..။ မဲနက်နေသော ဥကြီးတွေပေါ်တွင် စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော လီးချောင်းကြီးက ပျော့တွဲတွဲကြီး..။
မခင်လှ လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ညှပ်၍ လီးချောင်းကြီးကို မလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ လက်ဖဝါးဖြင့် အောက်မှ ပင့်ကိုင်လိုက်ပြီး ပျော့တွဲတွဲ လီးချောင်းကြီးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် အပေါ်က အရေပြားကို ဆွဲတင်ဆွဲချဖြင့် လုပ်ပေးသည်.။
ခဏကြာတော့ လီးက မာသလိုလို ဖြစ်လာသည်..။ အရည်ပြားဆွဲချလိုက်တော့ ပြဲပြဲသွားသော လီးထိပ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း မခင်လှ၏ စိတ်တွေက ပို၍ ထလာသည်..။
စံဖေ၏ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စံဖေက မနိုးသေး..။ အိပ်၍ ကောင်းနေဆဲပင်…။ အရေပြားဆွဲချလိုက်၍ ပေါ်လာသော ဒစ်ကြီးကို လက်မထိပ်လေးဖြင့် ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးသည်..။ လီးခေါင်းကြီးက ပွသလိုဖြစ်လာပေမယ့် လီးတန်ကြီးကတော့ မထူးခြား ပျော့ခွေနေဆဲသာ ဖြစ်သည်..။
လီးကို အသာဆုပ်၍ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဂွင်းတိုက်ပေးသည်..။ ထိုသို့လုပ်ရင်း စံဖေ၏ မျက်နှာကိုလည်း လှမ်းလှမ်းကြည့်သည်..။ စံဖေက တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်သလို သူ့လီးကလည်း နိုးထလာခြင်း မရှိပေ..။
မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေသော မခင်လှ၏ ပေါင်ကြား၌သာ အရည်တွေက ရွှဲသထက် စိုရွှဲလာသည်..။
မခင်လှ စိတ်ပျက်၍ လီးကို လက်ထဲမှ လွှတ်ချလိုက်သည်..။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် စံဖေကို ကျောခိုင်းလိုက်ပြီး ရင်လျားထားသော ထဘီကို ဆွဲတင်၍ ဝတ်လိုက်သည်..။ ဟုတ်ပါသည်..။ မခင်လှက စောစောက စံဖေကို နှိုးတော့မည်ဟု ကြံကထဲက အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ကာ ထဘီကို ရင်လျားထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဒါမှ စံဖေနိုးလာ၍ အလုပ်ဖြစ်လျင် လွယ်ကူမည်သည်..။
ပေါင်ကြားမှ ထွက်နေသော အရည်များကို အိမ်သာသို့ဝင်၍ ရေဆေးသည်..။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားပြန်ဝတ်ကာ ကျိတ်မှိတ်အိပ်တော့မည်ဟူသော အတွေးဖြင့် မခင်လှ ခြင်ထောင်ကို မ၍ ထွက်ကာ အိပ်ခန်းထဲထွက်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးဖက်သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်…။ ထိုသို့ လျှောက်လာရင်း ခြေရင်းဖက်တွင် ခြင်ထောင်ထောင်၍ အိပ်နေသော ဖိုးချို၏ ထံသို့ မခင်လှ၏ မျက်လုံးက ရောက်သွားသည်..။
ဟုတ်ပါသည်..။ ခြင်ထောင်ထဲတွင် အိပ်နေသော ဖိုးချိုက ခြင်ထောင်ကို ကန့်လန့်ကြီး အိပ်နေကာ ခါးအောက်ပိုင်း ကိုယ်တပိုင်းက ခြင်ထောင်အပြင်ဖက်သို့ ရောက်နေသည်..။ ပြီးတော့ ပုဆိုးက ခါးတွင် မရှိ..။ ဒူးဆစ်အထိ လျှောကျနေသည်..။
မြင်လိုက်သော မခင်လှ သူမဘာသာပင် သတိမထားမိလိုက်ပဲ ဖိုးချိုး၏ အနားသို့ ရောက်သွားကာ အနီးကပ် ငုံ့၍ ကြည့်လိုက်မိသည်..။
မခင်လှ တစ်ယောက်တည်း တိုးတိုးလေး တုန်တုန်ခိုက်ခိုက် လေး ပြောလိုက်မိသည်..။ မဲနက်လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးက နဲတာကြီး မဟုတ်သလို မာမာတောင့်တောင့်ဖြစ်နေသော လီးကြီးကလည်း အကြီးကြီးပဲ….။ ကိုစံဖေ၏ လီးထက် သိသိသာသာကြီးကို ကြီးကြောင်း မခင်လှ တွေးလိုက်သည်..။
ဗြုန်းဆို မခင်လှ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ခြင်ထောင်ထဲသို့ နားစွင့်လိုက်တော့ ဖိုးချိုက တရှူးရှူး အိပ်မောကျနေသည်..။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားချင်တော့ပဲ မခင်လှ၏ လက်တစ်ဖက်က ဖိုးချို၏ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။
ကိုင်လိုက်သော လက်က တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြစ်နေပြီး လက်ထဲက လီးကြီးကတော့ တဒိတ်ဒိတ် သွေးတိုးနေသည်..။ လက်ဖြင့် ဆုပ်ထားဆဲမှာပင် လီးကြီးက တင်းခနဲ တင်းခနဲ ဖြစ်ကာ ကြီး၍လာသည်…။
ပူနွေးမာကျောလှသော လီးကြီး၏ အတွေ့က မခင်လှအား အရာရာကို မေ့သွားစေသည်..။ လက်တစ်ဖက်က လီးချောင်းကြီးကို ကိုင်ရင်း ကျန်သော လက်တစ်ဖက်က လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးကို အောက်မှနေ၍ ပင့်မကာ ကိုင်လိုက်သည်..။
ပြီးတော့ ဂွေးဥကြီးကို ဖွဖွလေး ဆုတ်ဆုတ်ပြီး ညှစ်ကြည့်နေမိသည်..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်အတွင်းမှ လီးချောင်းကြီးကတော့ စံချိန်လွန်အောင်ပင် မာတောင့်လာပြီး ဆုတ်ကိုင်ထားသော မခင်လှ၏ လက်ထဲမှ ရုန်းကန်ထွက်နေသယောင် ..တဆတ်ဆတ်တုန်ခါ၍ လာရသည်…။ ထကြနေသော သွေးသားများနှင့် ထိတွေ့နေရသော အထိအတွေ့များကြောင့် မခင်လှမှာ တစ်လောကလုံးကို မေ့သွားခဲ့ရပြီ..။
လီးပေါ်မှ လက်ကို လွှတ်လိုက်တော့ ဖိုးချို၏ ဧရာမလီးကြီးက မိုးကိုမျှော်ကာ ထောင်မတ်လျက် လီးခေါင်းကြီးက တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသည်..။ သည်လီးကြီးကို တရှိုက်မက်မက် ကြည့်ရင်း မခင်လှ ဖိုးချို၏ ဘေးတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရာမှ ရင်ဘတ်တွင် စည်းနှောင်ထားသော ရင်လျားထားသည့် ထဘီကို ဖြည်၍ ချွတ်ချလိုက်သည်..။
ပြီးတော့ ဒူးကို တစ်ဖက်စီကြွပြီး ထဘီကို ကွင်းလုံးကျွတ်သွားအောင် ချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ဖွေးနှစ်လုံးတစ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် မခင်လှတစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းနေပြီ…။ ရင်အစုံက နိမ့်ချည်မြင့်ချီ ဖြစ်နေသည်..။
မခင်လှ အလိုလိုနေရင်း မောနေသည်..။ တုန်ရင်နေသော လက်ချောင်းလေးများဖြင့် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော လီးကြီးကို လှမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ ဖိုးချို၏ ခါးဆီသို့ ခွတက်လိုက်သည်…။
သည်အခိုက်မှာပင် ခြင်ထောင်က လှုပ်ခနဲ လန်တက်သွားပြီး ကြုံးထ၍ ထိုင်လိုက်သော ဖိုးချိုက သူ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေသော မခင်လှကို သိမ်း၍ ဖက်ကာ အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချလိုက်သည်..။
ရှက်ရမ်းရမ်း၍ ပြောနေသော်လည်း မရုန်းပါ…။ ရုန်း၍လည်း မရပါ…။ ဖိုးချိုက ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကြုံး၍ ဖက်ထားတော့ မခင်လှ အသက်ရှူပင် မရချင်တော့…။
ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ငုံ့ကြည့်သည်..။ ဖွေးနှစ်နေသော နို့ကြီးတွေက မမဖြူ၏ နို့တွေထက် နှစ်ဆခန့်ကြီးသည်..။ အားရစရာကြီးပင်…။ နို့သီးတွေကလည်း ခပ်ထွားထွား…။ နို့တစ်လုံးကို ငုံ၍ အငမ်းမရ စို့လိုက်သည်..။
မခင်လှ ရင်ဘတ်ပင် ကော့တက်သွားရသည်..။
သန်လိုက်တာမှ ရင်ခေါင်းထဲအထိပင် တစစ်စစ် ဖြစ်သွားရအောင် စို့ပစ်နေသည်..။ တအားစို့လေတော့ ခံရတဲ့သူက ကျင်ခနဲ ကျင်ခနဲ နာနာသွားပြီး နို့ရည်ကြည်တွေက တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ထိုနို့ရည်ကြည်တို့၏ ချိုမြိန်သော အရသာကိုပင် ဖိုးချိုက ခုံမင်နေသည်…။ နောက်ထပ် နို့တစ်လုံးကို ပြောင်းစို့ရင်း ဖိုးချို၏ လက်တစ်ဖက်က မခင်လှ၏ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားသည်…။
မခင်လှ ပေါင်နှစ်လုံးကို အတင်းစေ့သည်..။ ဒါပေမယ့် သူမထက်မြန်သော ဖိုးချို၏ လက်က စောက်ဖုတ်ကြီးကို အမိအရ ဖမ်းဆုတ်မိနေပြီ…။ ထွက်နေသည့် အရည်တွေက အဆမတန် ဖောင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးသာ မက ပေါင်တွင်းသားတွေထိပါ ရွှဲနစ်နေသည်..။ ရေဖြင့် လောင်းထားသလားပင် အောက်မေ့ရသည်..။
သူ့အကြောင်းကို သူသိသော မခင်လှ အတော်ရှက်သွားသည်..။ မျက်နှာကို တစ်ဖက်သို့ စောင်း၍ လွှဲထားလိုက်မိသည်..။
ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ နို့သီးကို နို့အုံကြီး ရှေ့ထွက်လာအောင် နှုတ်ခမ်းနှင့် ညှပ်၍ ဆွဲလိုက်ပြီးမှ အားကုန်စုပ်၍ စို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ဆန္ဒတွေ ပြင်းလွန်းလာသဖြင့် မခင်လှ တစ်ကိုယ်လုံး ကတုန်ကရင်ကြီး ဖြစ်လို့လာရလေသည်..။
ကဲ….အစ်မ စောစောက အပေါ်က တက်ပြီးလုပ်မလို့မို့လား….လုပ်တော့လေ……
ပြောလဲ ပြော ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ လှိမ့်ဆင်းကာ ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်..။ ဖိုးချို၏ ကြီးမားလှသော လီးကြီးက အကြောပြိုင်းပြိုင်းဖြင့် တောင်မတ်လျက် ရှိသည်..။
မခင်လှက ပက်လက်လှန်နေရာမှ လီးကြီးကို မျက်လုံးလေးစွေကာ ကြည့်နေရာမှ ပြောလိုက်ပြီး ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်.. ။ ပြီးတော့ ဖိုးချို၏ ခါးပေါ်သို့ တက်ခွလေရာ ဖိုးချိုက ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့် သူမကို ကြည့်နေကြောင်း တွေ့လိုက်ရတော့ မခင်လှ မျက်နှာလေး ရဲသွားသည်..။
ခပ်ဆတ်ဆတ်လေသံနှင့်အတူ လက်တစ်ဖက်က လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဖိုးချိုမျက်လုံးမှ မှိတ်ထားရဲ့လားဟု ကြည့်လိုက်ရာ ပြောထားသည့်အတိုင်း မျက်လုံးမှိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၍ မခင်လှသည် လက်ထဲမှ လီးကြီးထိပ်ဖြင့် သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးထိပ်ရှိ စောက်စေ့ကို ဖိဖိပြီး ပွတ်သည်..။ ထိုသို့ ပွတ်ရင်း မခင်လှ၏ ပါးစပ်လေးက ဟ၍ဟ၍ သွားသည်.။
စောက်စေ့ကို လေးငါးကြိမ်မျှ ပွတ်ပြီးသောအခါတွင်မှ လီးထိပ်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင် တြေ့ပီး မခင်လှ တဖြေးဖြေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချသည်..။ ထိုသို့ လီးကို စောက်ပတ်ထဲ သွင်းရင်း မခင်လှ၏ ပါးစပ်လေး ဟ၍ သွားရုံမက လည်ပင်းကြောလေးများ ထောင်အောင်ပင် သူမ၏ မျက်နှာလေးက မော့၍ သွားသည်..။
ဟင်း ဟင်း….ကြီးလိုက်တဲ့ ဟာကြီးကွယ်….ဟင်း…..ဟင်း….
သူမဘာသာ ငြီးတွားရင်း ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချကာ လီးကိုသွင်းယူသည်..။ လီးတန်ကြီး တဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက်အလိုတွင်တော့ အောက်မှ ဖိုးချိုက ခါးကိုဆတ်ခနဲ ကော့ကာ လီးကိုဆောင့်၍ သွင်းလိုက်သည်..။
စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးချောင်းကြီးတစ်ခုလုံး တဆုံးဝင်သွားတော့ မခင်လှက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်မှပင် ဇကောဝိုင်းပြီး နှဲ့ နှဲ့ပွတ်ပေးသည်..။ ပြီးတော့မှ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ဖိုးချို၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချကာ ဖင်ကြွပြီး တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်၍ လိုးသည်..။
ဖိုးချိုက ခေါင်းထောင်ထ၍ မခင်လှ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးအား တစ်လုံးကိုဆွဲ၍ တစ်လုံးကို အားရပါးရ စို့သည်..။
မခင်လှ၏ ဆောင့်ချက်က တစ်ချက်ချင်း လေးလေးမှန်မှန်နှင့် ဆောင့်သည်..။ ပြီးလျင် လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်လိုက် စောက်ပတ်ဝကို လီးအရင်းတွင် ကပ်၍ နှဲ့လိုက်နှင့် လိုးသည်..။ ထိုသို့ဆောင့်၍ လိုးရင်း မခင်လှ၏ မျက်လုံးလေးတွေက စင်း၍ ကျသွားရသည်..။
တစ်ချက်ချင်း လေးလေးနှင့် မှန်မှန်ဆောင့်လိုးရင်း အရသာခံကာ ဇိမ်ယူနေသော မခင်လှမှာ ခဏအကြာတွင် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာပြီး မောသံပေါက်လာသည်..။ တစ်ချက်ချင်း လိုးနေသောကြောင့် အောက်မှ ဖိုးချိုကလည်း အားမရနိုင် ဖြစ်လာသည်..။
မခင်လှ၏ ဆောင့်ချက်တိုင်း လီးကိုခပ်ပြင်းပြင်း အောက်မှ ပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ မခင်လှမှာ တအင့်အင့်နှင့် ဖြစ်လာရုံမက ဟင်းခနဲ ဟင်းခနဲ လေအံသံလေးတွေပါ ထွက်လာသည်..။
အားမရနိုင်သော ဖိုးချိုတစ်ယောက် သူ့စိတ်တိုင်းကျ အားပါးတရ ဆောင့်လိုးချင်စိတ်က ပြင်းသထက် ပြင်းလာသည်..။
အစ်မမောရင် ကျနော် တလှည့် လိုးပေးအုံးမယ်….နော်…
မခင်လှက စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကိုချွတ်၍ ဘေးကိုပက်လက်လှန်ချတော့မည့်အလုပ် ဖိုးချိုက အချိန်မှီ ပြောလိုက်ရင်း မခင်လှကို တင်းကြပ်စွာဖက်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဖိကပ်၍ သွင်းထားလိုက်သည်..။
ထို့နောက်တွင်မှ ဖက်လျက်သား မခင်လှကို ဘေးသို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ရင်း ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပါသွားသည်..။ မခင်လှ၏ ကျောပြင်လေး အိပ်ယာနှင့် ထိသည်နှင့် ဖိုးချိုက ဒူးထောက်လိုက်သည်..။
ထိုအခါတွင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ လှေကြီးထိုး ပုံစံဖြစ်သွားပြီး မခင်လှက ပက်လက်လှန်လျက် ဒူးထောင်ပေါင်ကားလုပ်ထားပြီး ဖိုးချိုက သူမ၏ ထောင်ထားသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင် ဒူးထောက်လျက် ရှိနေသည်..။
ပုံစံပြောင်းခြင်းကြောင့် မခင်လှ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးထည့်ကာ ဖိကပ်ထားသော ဖိုးချို၏ လီးကြီးမှာ အပြင်သို့ တဝက်ခန့်ထွက်နေလေသည်..။ ထိုအပြင်သို့ တဝက်ခန့်ထွက်နေသော လီးကြီးကို ဖိုးချိုက တစ်ချက်ထဲနှင့် ဆောင့်၍သွင်းလိုက်သည်..။
မခင်လှ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေး သိမ့်ခနဲလှုပ်သွားသည်..။ ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ နို့နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ဆွဲကိုင်ကာ လီးတန်ကြီးကို တဆုံးနီးပါး ထုတ်၍ အားပါးတရ ဆောင့်၍လိုးတော့သည်..။
မခင်လှကလည်း အောက်မှနေ၍ အငြိမ်မနေ ဖိုးချို၏ ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးနေရုံမျှမက တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း ကော့ ဝိုင်းဝိုင်းပေးသည်..။
ဖိုးချို၏ဆောင့်ချက်တွေက တဖြေးဖြေး အားပါလာရုံမျှမက သွက်၍လည်းလာသည်..။ မခင်လှ ဆက်ပြီး ကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ပါ…။ သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ကိုင်နေသော ဖိုးချို၏ လက်ဖျံနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှစ်ကိုင်လိုက်ကာ ခါးကကော့ကော့တက်သွားရင်း ပြီးသွားလေတော့သည်..။
မခင်လှ၏ မျက်နှာလေးက ရှုံ့မဲ့သွားပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေက စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးကြီးကို လက်နှင့် ညှစ်၍ဆွဲဆုတ်လိုက်သည့်အလား ဆွဲညှစ်လိုက်လေတော့ ဖိုးချိုလည်း မခံစားနိုင်တော့ပဲ သုတ်ရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်ရပါတော့သည်..။